यस्तो सुनाए परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन भ्रमणका एजेण्डा बारे ! पढ्नुहोस | Citizen FM 97.5 Mhz
Home > राजनीति > यस्तो सुनाए परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन भ्रमणका एजेण्डा बारे ! पढ्नुहोस
यस्तो सुनाए परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीन भ्रमणका एजेण्डा बारे ! पढ्नुहोस
वैशाख ३, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे कुनैपनि छलफल नहुने बताएका छन् ।
मन्त्री ज्ञवालीले बुढिगण्डकी लागयत पुर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र कामबारे वर्तमान सरकारले अध्ययन गरिरहेकाले त्यसवारे अहिले नै कुनै निर्णय नगर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
आजै साँझ ५ दिने चीन भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनसँग यसअघि भएका सहमति, सम्झौता र सहयोगका बारेमा बृहद छलफल गर्ने बताए ।
उनले पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला बेइजिङमा भएको पारवहन सम्झौताको डकुमेन्ट गत अगस्तमा मात्रै बुझाएको र उक्त प्रतिवेदनबारे अध्ययन भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले तातोपानी, चिलेमे, केरुङ र कोरला नाका खुलाउने विषयमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रीत रहने समेत बताए । ‘तातोपानी, चिलेमे, केरुङ र कोरला नाका खुलाउने विषयमा धेरै कुराको दुईपक्षीय रुपमा पहचिान भइसकेको छ अव ति विषयलाई कसरी छिटो निश्कर्षमा पुरयाँउन सकिन्छ भन्नेमा यो भ्रमण केन्द्रीत हुन्छ’ मन्त्री ज्ञवालीको भनाई छ ।
तातोपानी नाका खुलाउने प्रयास यसअघि नै भएपनि डाँडो नै हल्लिएकाले सो नाका खुलाउन केहि समय लाग्न सक्ने भएकाले अरु नाका चाडो खुलाउन पहल गरिने उनको भनाई छ । त्यस्तै भ्रमणका बेला नेपालमा भएको तीनै तहको चुनावबारे चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराउने तयारी गरेको पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले २०१८ उच्चस्तरीय भ्रमणको बर्षको रुपमा रहने भन्दै नेपालका प्रधानमन्त्री चीन जाने र चिनियाँ उच्चपदाधिकारीहरु यो बर्ष नेपाल आउने दावी समेत गरे । नेपालले दुई छिमेकी देशबीच पन्चशीलकै अाधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए ।
सरकारले यसअघि भुकम्पपछि चिनियाँ सकारले पुर्वधार निर्माणमा दिने भनेको सहयोग र उसले पुननिर्माणमा गर्दै आएका कामबारे पनि समीक्षा हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चीन सरकारले भुकम्पपछि भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा घोषणा गरेकोमध्ये ३ मिलियन युआन रकम दिइसको छ ।
त्यस्तै दरवार हाइस्कुल र बसन्तपुर दरबार निर्माण गर्ने बचन दिएको चीनले बसन्तपुरको पुननिर्माण सुरु गरिसकेको छ । दरबार हाइस्कुल पुननिर्माणमा भने कुन डिजाइनमा गर्ने भन्ने सहमति नहुँदा सुरु नै हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै यो भ्रमणमा सम्बन्ध सुदृढ पार्ने तथा सडक रेल, ट्रान्समिसन लाइन लगायतका विषय पनि छलफलका विषय बन्ने मन्त्री ज्ञवालीले जनाएका छन् । मन्त्री ज्ञवाली २१ अप्रिलमा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ ।
चीन सरकारले यसअघि नेपालमा गर्ने भनेको सहयोगबारे अलमल भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण र त्यसपछि हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमणले सम्झौता कार्यन्वयनमा तीव्रता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षकहरुलाई प्रचण्डले भने-‘तपाईका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नु’
तनहुँले पायो ९५ दिनपछि नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी
५ बर्षका लागि ओलीले बनाएको यी भाग्यमानि ४ मन्त्रीहरु !के यी काम गरेर जनताको मन जित्लान ?पढ्नुहोस
एमाले माओवादी पार्टी एकतामा अन्योल, मोदी भ्रमण पछि झनै एकताप्रति शंका उपशंका ! (पढ्नुहोस)
पार्टी एकताबारे ओली र प्रचण्डबीच आज पनि छलफल हुँदै